यस्ता यस्ता भित्रि कुरा, सिटीइभिटीमा सदस्यसचिव र उपाध्यक्षको मनपरीलाई मन्त्रीको साथ — SuchanaKendra.Com
यस्ता यस्ता भित्रि कुरा, सिटीइभिटीमा सदस्यसचिव र उपाध्यक्षको मनपरीलाई मन्त्रीको साथ
काठमाडौं, । चौतर्फी विरोधका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्याबसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभिटी) को ऐन संसदमा पेश नहुने भएको छ । ब्यापक दबाबका कारण शिक्षा मन्त्रालयले सिटीइभिटीलाई ऐनको विषयमा छलफल गर्न लगाएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेकोले परिषद् कार्यालयले पेश गरे अनुसार ऐन आउने कुरामा सिटीइभिटीका एक उच्च अधिकारीले शंका व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आफू अनुकुल ऐन बनाएर केही संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमका लागि अनुमति दिने योजना बनाइरहेका छन् । त्यसका लागि उनले ऐन संशोधन गरी सिटीइभिटीलाई खारेज गरी नयाँ संस्था स्थापना गर्न खोजेका छन् । जसको चाौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।
यता, सिटीइभिटीमा नेपाल सरकारको मितव्ययीता सम्बन्धी नीतिको ठाडो उलङघन गरिएको छ । हालै मात्र २० जना कर्मचारीहरुलाई २ हप्ताको कोरिया भ्रमणको कार्यक्रम तय गरिएको छ । बिना आधार र कुनै मापदण्ड बेगर चाकडीको आधारमा प्रमोदभक्त आचार्य र गीता आचार्य (ढुंगाना) श्रीमान्/श्रीमतीलाई कोरिया पठाउने निर्णय गरिएको हो । आचार्य भर्खरै मात्र सह प्रशासक पदमा बढुवा भएका र ढुंगाना परिषद्को खर्चमा २ बर्षको स्नातोकोत्तर तह अध्ययन गरी भर्खरै मात्र कार्यलयमा हाजिर भएकी कर्मचारी हुन् ।
यसरी एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिइनु तथा श्रीमान/श्रीमतीलाई एउटै समूहमा बिदेश पठाउनुलाई पनि पक्षपातीको रुपमा लिइएको छ । यो प्रकरणले देशको दुर्गम र उपत्यका बाहिरका शिक्षालयहरुमा लामो समय सम्म बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई निराशा बनाएको छ । २२ देखि २५ बर्ष परिषद््मा सेवा गरेका धेरै कर्मचारीहरुलाई एक पटक पनि विदेश पठाइएको छैन ।
आसेपासे कर्मचारीहरुलाई मात्र गोप्य रुपमा छनौट गरी विदेश पठाउने निर्णय गरिदै आएको छ । त्यसैलाई अनुसरण गर्दै यस पटक आशाकुमारी श्रेष्ठ, प्रमोदभक्त आचार्य, यमप्रसाद भुर्तेल, प्रेमकुमार गुरुङ्ग, अकिम श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ, प्रमिला मालाकार, नवराज कोईराला, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, गीता ढुंगाना (आचार्य), हेमन्त पराजुली, नलराम देवकोटा, मोहन लामिछाने, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, कल्प बस्नेत, गोबिन्द श्रेष्ठ, सीमा कुमारी श्रेष्ठलगायत विदेश जाने सूचीमा छन् । यीमध्ये १–२ जना बाहेक सवै जना दोहो¥याएर बिदेश गइसकेका कर्मचारी हुन् ।
विनियमावली केवल कमजोर कर्मचारीहरुलाई मात्र लागू गरिएको छ । परिषद्अ न्तर्गत शिक्षालयको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन भएका कार्यालयहरुमा हाजिर नगराई परिषद् कार्यालयमा काजमा राखिएको छ । परिषद्को कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी बिनियमावली २०६९ को विनियम ३७(३) अनुसार ‘जुन पद र कार्यालयका लागि कर्मचारीको बढुवा भएको हो सोही पद र कार्यालयमा पदस्थापना भई कार्य गर्नु पर्नेछ’ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
तर, नियमावली बिपरित बरिष्ठ होटल तथा रेष्टुरेन्ट लज प्रशिक्षक खेमराज पोखरेल, ईश्वरचन्द्र घिमिरे दुबैलाई केन्द्रमा हाजिर गराईएको छ भने कृषि प्रशिक्षक इश्वरीचन्द्र देवकोटालाई तनहुँ प्राबिधिक शिक्षालयमा पदस्थापना गरिएपनि हाजिर भने केन्द्रमा गराइएको छ । देवकोटाकी श्रीमती निर्मला गिरीलाई धौलागिरी प्राबिधिक शिक्षालयमा पदस्थापना गरिएको छ । तर, उनको पनि हाजिर भने केन्द्रमा गराइएको छ ।
त्यस्तै, बरिष्ठ कृषि प्रशिक्षक शालिकराम डाँगीलाई जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा पदस्थापन गरिएको छ । तर, उनलाई पनि पदस्थापन भएको पदमा हाजिर नै नगराई सेती प्राविधिक शिक्षालयको प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । भेरी प्राविधिक शिक्षालयको रिक्त दरबन्दीमा बढुवा भएका बिनोद बडाललाई राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको निर्देशक बनाएर नियम कानुनको धज्जी उडाइएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षालय प्रमुखमा बढुवा भई पदस्थापन भएकी निशी श्रेष्ठ(मानन्धर)लाई पनि नियम विपरित राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमा हाजिर गराएर विनियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । बरिष्ठ ट्रेनर पदमा बढुवा भएका गोविन्द पौडेललाई कालिगण्डकी पोलिटेक्नीक तनहुँको प्रमुख बनाइएको छ ।
परिषद्को विनियमावली परिच्छेद ८, ७१(१) अनुसार कर्मचारीले पदमा बहाली गरेको मिति देखिको तलब भत्ता पाउने छ भन्ने ब्यबस्था रहेको छ । पदस्थापन भएको पदमा हाजिर नभएको कर्मचारीलाई बिनियम बमोजिम तलब भत्ता खुवाउन मिल्ने आधार देखिदैन ।
मान्छे केन्द्रमा राख्ने र दरबन्दी शिक्षालयमा राख्नुको कुनै औचित्य नहुनले परिषद्का एक वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् । शिक्षालयको दरबन्दीमा रहि धेरै कर्मचारीहरुलाई परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय र पनिकामा हाजिर गराइएका कारण एकातिर शिक्षालयको नियमित प्रशिक्षणमा बाधा पुगेको छ भने अर्कोतिर केन्द्रमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी थुप्रिएका छन् ।
सिटीइभिटीमा यतिसम्म मनपरी छ कि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टेकनारायण पाण्डेकी श्रीमती मञ्जु पाण्डे हेटौडामा लेखापाल पदमा पदस्थापन भएकोमा १ दिन मात्र उक्त कार्यालयमा हाजिर गराइ परिषद् कार्यालयमै काजमा राखिएको छ ।
मञ्जुलाई इन्स्योर परियोजना हुँदै सहसचिव पाण्डेको दवाबमा अहिले राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमा सरुवा गरिएको छ । यसरी परिषद् कार्यालयलाई कहिले मन्त्रीले त कहिले सहसचिवले खेलौना बनाइरहेका छन् ।
परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी बिनियमावली २०६९ परिच्छेद ६ को ६३ (५) बिपरित लामो समय सम्म काजमा राखिएको छ । विनियमावली विपरित काजमा रहेका कर्मचारीहरुले गरेका काम कानुनसम्मत हुने कि नहुने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
विभिन्न शिक्षालयबाट परिषद् कार्यालय, पनिका र एक शिक्षालयबाट अर्को शिक्षालायमा धेरै कर्मचारीहरु नियम विपरित काजमा राखिएको छ । त्यस्तै दरबन्दी नै नभएको स्थानमा कामु बनाएर पठाइएको छ ।
अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणीको पद नै सिर्जना नभएको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र पोखरा प्राविधिक शिक्षालयमा अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणीको सुबिधा पाउने गरी कामु शिक्षालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसरी मन्त्री पोखरेल, सहसचिव पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. कुलबहादुर बस्नेत र सदस्य सचिव पुष्परमन वाग्लेको मिलेमतोमा विनियमावलीको धज्जी उडाउँदा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको छ ।